तलब कम भएको झोँकमा यी हुलाकीले ३ बर्षसम्म समान डेलिभरी नगरीकन आफ्नै घरमा थुपारिरहे ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»तलब कम भएको झोँकमा यी हुलाकीले ३ बर्षसम्म समान डेलिभरी नगरीकन आफ्नै घरमा थुपारिरहे !
तलब कम भएको झोँकमा यी हुलाकीले ३ बर्षसम्म समान डेलिभरी नगरीकन आफ्नै घरमा थुपारिरहे !
By रिता घिसिंग on ४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०८:०४ रोचक खबर
एजेन्सी : दैनिक खर्चको चाप बढिरहने तर तलब भने जहीँको तहीँ भएसँगै धेरै जागिरे तथा कामकाजी मानिसहरु सधै तनावमा रहन्छन् । खर्च धान्ने पैसा कमाउनका लागि कतिपयले दुई तीनवटा काम गर्दछन् त कतिले खाइपाई आएको जागिर छाडेर अर्को जागिर खोज्छन् । तर आफ्नो तलब कम भएको झोँकमा इटालीका एकजना हुलाकीले जे गरे त्यो चाहीँ सायद अहिलेसम्मकै नौलो हो ।
हुलाकबाट पत्र तथा सामानहरु डेलिभरी गर्ने ती पोस्टम्यान अर्थात् हुलाकीलाई आफ्नो तलब निकै कम भएपछि अति नै रिस उठेछ क्यारे । फलस्वरुप उनले हुलाकमार्फत आफुलाई डेलिभरीका लागि जिम्मा प्राप्त भएका कुनैपनि पार्सल सम्बन्धित मानिसको डेलिभरी गरेनन् । एक दुई दिनमात्र कहाँ हो र ? पूरै तिन वर्षसम्म उनले सामान डेलिभरी नगरीकनै आफ्नो घरमा थुपारिरहे । तर कसैले पत्तो पाएन ।
गत वर्ष सन् २०१७ मा यी हुलाकीले जागिर छाडेका थिए । सेवा निवृत्त भएपछि एक दिन उनी गोजीमा यत्तिकै चक्कु बोकेर हिँडिरहेका थिए । एकदिन अकस्मात् स्थानीय पुलिसले नियमित गस्तीका क्रममा ती मानिसलाई चक्कु साथमा अवस्थामा पक्राउ गर्यो ।
त्यसपछि पुलिसले उनको घरमा खानतलासी गर्न पुग्यो । जब पुलिसले उनको घरका खानतलासी गर्यो तब त्यहाँ डेलिभरी नभएका विभिन्न व्यक्तिका नाउँका ४० बक्सा पार्सल फेला पार्यो । ती बक्समा बैंक स्टेटमेन्ट, बिल, निजी पत्रहरु लगायत विभिन्न सामानहरु प्नि थिए । उनले डेलिभरी नगरी घरमा थुपारेका पार्सलहरु जम्माजम्मी ४ सय किलो थिए ।
अन्ततः पुलिसले ती मानिसलाई चोरी गरेको, अवैध हतियार राखेको तथा पत्रहरुको गलत उपयोग गरेको मुद्दा चलायो । ती पूर्व हुलाकीले एक वर्षको जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् अहिले ।